Falanqaynta Kaarka Deynta iyo Hubinta Moobaylka Oo La Sharaxay | Martech Zone
Falanqaynta Kaarka Deynta iyo Hubinta Moobaylka Oo La Sharaxay
Lacag bixinta moobaylku waxay noqdeen wax iska caadi ah iyo istiraatiijiyad adag oo lagu xirayo ganacsiga si dhakhso leh iyo u fududaynta howlaha lacag bixinta macaamiisha. Haddii aad tahay adeeg-bixiye e-commerce oo wata gaadhigi wax iibsiga oo buuxa, a baayacmushtar leh iibsiga mobilada (tusaalaheena halkan), ama xitaa adeeg bixiye (waan isticmaalnaa FreshBooks qaansheegashada iyadoo la adeegsanaayo lacag bixinta), lacagaha mobiladu waa istiraatiijiyad weyn oo lagu soo koobayo farqiga u dhexeeya go'aanka iibsiga iyo beddelka dhabta ah.
Markii ugu horreysay ee aan isdiiwaangelinnay, waxaan si buuxda uga yaabnay sida ay u adag tahay in la kaco oo la ordo oo la fahmo dhammaan khidmadaha la xiriira. Taasi waxay ahayd dhowr sano ka hor… hadda dhammaan-hal-xalka sida Bluepay ayaa fududeynaya nidaamka iyo ujrooyinka la xiriira aqbalida kaararka deynta. Waxay halkaan ka siiyeen tilmaamo akhristayaashayada ah.
Shirkad kasta oo aqbashay kaararka amaahda waxay fursad u leedahay inay yareyso kharashka iyadoo u adeegsaneysa bixiyeyaasha kaararka amaahda iyo nidaamyada lacag-bixinta. Waxaa jira xulashooyin kaladuwan oo kaladuwan oo suuqa yaal, mid walbana leh astaamo iyo kharashyo kaladuwan. Raadi mid bixiya nabadgelyo sare, sahlanaan sare, qiime jaban, iyo tan ugu muhiimsan waxtarkeeda. Hawlwadeennada lacag-bixinta ayaa ku kala duwan qiimaha marka ay timaado cabbirka hawlgalka, mugga lacag-bixinta aad shaqeyneyso iyo awoodda aad u leedahay inaad ku dhisto aqoonsi sumcad leh macaamiisha mustaqbalka. Mar haddii nidaamyadaada lacag-bixinta ay jiraan, uma baahnid inaad walwaasho - waxaad diiradda saari kartaa badeecadaada iyo farsamadaada. Kristen Gramigna, CMO oo ka tirsan Bluepay.
Jeegaga mobilada waxay ku shaqeeyaan adoo adeegsanaya aaladda mobilada ee ganacsadaha si ay ugu gudbiyaan macluumaadka iibinta kaarka deynta, u oggolaadaan kaarka, una diraan rasiid. Adeegsiga a koontada ganacsiga mobilada, iibka waxaa si elektaroonik ah loogu gudbiyaa guriga nadiifka ah iibiyahana wuxuu lacagtiisa ku helaa labo ama seddex maalmood oo keliya. Taasi waa horumar weyn oo ku dhowaad 30-maalin dib u dhac ah oo ku lug leh warqadaha kaararka deynta gacanta. Iibiyeyaasha goobta ka baxsan ayaa si fudud u soo celin kara lacag celin, sidoo kale. Kharashku badanaa wuxuu ka yimaadaa kaarka macaamiisha 24 saacadood gudahood.
Ka shaqeynta kaararka amaahda mobilka waxay siineysaa ganacsiyada xoriyad ay kaga baxaan gadaasha miiska iibka oo ay aadaan meesha ay ku sugan yihiin macaamiishoodu, haddii ay ahaan laheyd carwada degmada, xafladaha waddooyinka, gaari xamuul raashin ama xitaa qolka bandhiga ee ku dhegan goobtaada caadiga ah. Awoodda iibiyeyaashu u leeyihiin inay aqbalaan kaararka deynta iyo kaarka, meel kasta oo ay joogaan, waxay beddeleysaa Waddada weyn iyo habka ay Mareykanku wax u dukaameystaan.
Gelitaanka Bixinta iyo Nidaamka Bixinta
Albaabbada lacag-bixinta iyo processor-ka lacag-bixinta ayaa ah laba xiriiriyeyaal muhiim ah oo ku jira silsiladda wax-bixinta. Adiga oo ah milkiile ganacsi, waxaad u badan tahay inaad maqashay ereyadan oo aad la yaabtay waxa ku kala duwan. Waxaa jira afar dhinac oo ku lug leh macaamil kasta oo kaararka deynta ah:
Bangiga hantiday ee bixiya adeegyada wax soo saarka ganacsadaha
Bangiga soo saara ee soo saaray kaarka amaahda ama kaarka debit ee macaamilka
Doorka hawl-wadeennada lacag-bixinta iyo albaabbada lacag-bixintu way kala duwan yihiin, haddana mid kastaa waa qayb muhiim u ah aqbalaadda bixinta khadka tooska ah.
Waa Maxay Nidaamka Bixinta Lacagtu? - Si aad u aqbasho kaararka deynta ee meheraddaada, ganacsatadu waxay koonto ka samaysteen adeeg bixiye adeeg bixiye sida BluePay. Processor-ka lacag-bixinta wuxuu fuliyaa macaamil isagoo gudbinaya xogta udhaxeysa adiga, ganacsadaha; bangiga soo saara (yacni bangiga soo saaray kaarka deynta macmiilkaaga); iyo bangiga hantiday (yacni bangigaaga). Processor A lacag bixinta sidoo kale caadi ahaan waxay bixisaa mashiinada kaarka deynta iyo qalab kale oo aad u isticmaasho inaad ku aqbasho bixinta kaarka deynta.
Waa maxay Iridda Bixinta? - Albaabka lacag-bixinta ayaa si ammaan ah u oggolaanaya lacag-bixinta websaydhada ganacsiga. Ka fikir iyada oo ah barta internetka lagu iibiyo ee ganacsigaaga. Markaad iska diiwaangeliso koontada ganacsiga, adeeg bixiyahaagu wuu bixin karaa ama ma bixin karaa albaab lacag bixin ah.
Processor Payment vs. Payment Gateway: Kee Baan U Baahanahay?
Isticmaalka ugu badan ee albaabku waa dukaanka e-commerce ee internetka. Haddii aadan ahayn ganacsi e-ganacsi, waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn albaab lacag bixin ah. Xisaab ganacsi aasaasi ah ayaa ugufiican. Raadi koonto baayacmushtari oo leh qiimeyn macquul ah oo lacag bixin ah, 24/7 adeegga macaamiisha, iyo u hoggaansamida PCI (heerka u ah kaararka kaarka deynta).
Dhinaca kale, albaab lacag-bixin ayaa laga yaabaa inuu mustaqbalkaaga ku jiro haddii aad leedahay ama aad qorsheyneyso goob ganacsi e-commerce. Dhammaan bixiyeyaasha koontada baayac mushtarka ma leh albaab lacag bixin ah. Bixiyeyaasha qaarkood waxay isticmaalaan irridda lacag bixinta ee qeybta saddexaad, taas oo noqon karta dhibaato markii aad muranka leedihiin. Yaad la xiriireysaa markaad dhibaato haysato?
Iridda iyo Khidmadaha Wax-qabadka
Mid ka mid ah sababaha ay ururadu u daayaan hirgelinta nidaamka ku-deeqidda kaarka deynta ayaa ah khidmadaha wareersan. Waxay noqon kartaa wax adag in madaxaaga lagu wareejiyo dhammaan khidmadahaas kala duwan oo la go'aamiyo inay ku habboon yihiin iyo in kale hay'addaada gaarka ah. Liistada soo socota waxaa ku jira noocyada ugu caansan ee khidmadaha kaarka deynta.
Khidmadaha koontada baayacmushtarka - Ganacsade waa shaqsi kasta ama shirkad ka shaqeysa macaamilka kaararka deynta. Sidan oo kale, koontada wax-qabadka waxaa badanaa loo yaqaan xisaab ganacsi. Dhammaan lacag-bixinta waxaa lagu sameeyaa koontadan maaliyadeed.
Lacag hal mar ah - Xisaabaadka ganacsiyada badankood waxay la yimaadaan nooc ka mid ah khidmadda dejinta hore. Khidmaddaan waxaa loo gudbin karaa sidii dejinta albaabka ama khidmadda dalabka. Shirkadaha qaar sidoo kale waxay u baahan yihiin lacag siinta barnaamijka ama qalabka kale ee loo isticmaalo ka shaqeynta macaamilka. Miyaad adeegsaneysaa nidaam ku saleysan websaydh ama ma kiraynaysaa qalabkaaga? Hadday sidaas tahay, waxaad yeelan kartaa lacag bille ah halkii aad ka bixin lahayd hal-mar oo nidaamka ama qalabka ah.
Lacagta koontada bishii - Ku dhowaad akoon kasta oo baayacmushtarigu wuxuu la yimaadaa lacag bille ah. Khidmaddan waxaa loo gudbin karaa xisaab ahaan, bayaan, ama khidmad warbixinno ah. Caadi ahaan, khidmadaha billaha ah waxay u dhexeeyaan $ 10 illaa $ 30. Marka lagu daro ujrooyinka billaha ah, xisaabaadka qaarkood sidoo kale waxay u baahan yihiin khidmad bil kasta ugu yar.
Khidmadaha wax kala iibsiga iyo sicir-dhimista - Macaamil kasta inta badan wuxuu leeyahay laba kharash oo wax soo saar ah… an khidmadda alaabta (guud ahaan khidmadani waxay ku jirtaa $ 0.20 iyo $ 0.50) iyo a boqolkiiba macaamil. Khidmadaan waxaa loo gudbiyaa a sicir-dhimis. Qiimaha dhimista ayaa si aad ah ugu kala duwanaan doona processor-yada kala duwan, sida caadiga ah inta u dhexeysa labo ilaa afar boqolkiiba. Nooca kaarka deynta iyo habka wax lagu shaqeeyo labadaba door ayey ku leeyihiin sicir-dhimista. Inta badan khidmadda dhimista waxay ku dhacdaa shirkadda bixisa kaarka deynta (sida Visa, Discover).
Dhibaatada isbarbar dhiga kaararka iyo adeegyada
Waxay noqon kartaa mid aad u adag, haddii aysan macquul aheyn, in la isbarbar dhigo khidmadaha shirkadaha kaladuwan maxaa yeelay badankood kuma soo bandhigaan ajuuradahooda qaab fudud. Waxaan bilaabayaa inaan ka fikiro inta badan iridaha iyo hawlwadeenadu inay sidan u sameeyaan ujeeddo!
Tusaale ahaan, mararka qaarkood sicir-dhimista ayaa loo kala jabiyaa lacagta isdhaafsiga iyo khidmadda ururka maaraynta macaamillada kala duwan. Waxyaabo dheeraad ah oo saameyn ku yeelan kara khidmadda macaamilka waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Nooca kaarka la isticmaalo (tusaale ahaan kaarka deynta iyo kaarka deynta)
Habka wax lagu kala iibsado ee macaamilka (ie keyed vs. swiped)
Imtixaanada kahortaga khiyaanada (yacni isla cinwaanka loo isticmaalo cinwaanka qaansheegashada kaarka deynta iyo macaamilka gaarka ah?)
Khatarta la xidhiidha macaamil ganacsi (ie shirkadaha badankood waxay aaminsan yihiin in macaamillada la dhammaystiray iyada oo aan la marin kaar jireed ay ka khatar badan yihiin)
BluePay waa dhammaan-hal-bixiye, waxay leeyihiin albaab u gaar ah oo lacag bixin ah oo ay heli karaan dadka haysta koontada ganacsiga. Albaabka loo yaqaan 'BluePay gateway' waxaa loo isticmaali karaa bey'ad tafaariiq leh oo leh akhriste maro. Bluepay sidoo kale waxaa lagu dhex daray dhowr POS nidaamyada oo ay ka baaraandegi karaan macaamillada lacag bixinta 'PIN'. Adeegsiga albaab bixinta si ammaan ah loogu socodsiiyo lacagaha isku dhafan waxay yareyn kartaa khaladaadka, waxay dedejineysaa howlaha macaamil ganacsi, waxayna sahlaysaa dib u heshiisiinta
Haddii aadan rabin inaad maal gashato boosteejada, ama haddii aadan haysan websaydh ecommerce, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa albaabka 'BluePay' ee loo yaqaan 'Virtual Terminal' si aad wax uga qabato macaamil illaa intaad leedahay khadka internetka.
FIIRO GAAR AH: Nalama siin wax mushahar ah, wax xiriir ahna lama lihin Bluepay… iyagu sifiican ayey noogu filnaayeen inay bixiyaan dhammaan macluumaadka aan u baahanahay si aan u helno qoraalkan maqaalka ah!
Tags: bluepaykaarka maricredit cardujrada kaarka deyntakaararka deyntakaarka deyntaka hortagga khayaanadajeegaga wareegabixinta khidmadda albaabkaPCIwaafaqsanaanta pcilacag bixintaterminal dalwaddii
25 Tirokoobka Suuqgeynta Mobaylka ee 2014 ee Arrinta
Mobilada Ugu Horeeya Markaad Ku Xidhantahay Macaamiisha
Jun 4, 2015 saacadu markay ahayd 1:08 AM
Tani waxay sharraxaysaa wax kasta oo aan doonayay inaan ogaado. Maqaal weyn!